Iindaba -Ifashoni yeZinto eziLungileyo isishwankathelo sokupakishwa kwakhona kwefashoni
Imfashini yokuLungileyo, iqonga lolondolozo lwefashoni oluzinzileyo, iYunivesithi iUtrecht kunye noManyano lokuPakisha oluZinzileyo, babhale ngokubambisana iphepha elimhlophe elinikezela ngesishwankathelo sokupakisha esinokuphinda sisebenzise kumzi mveliso wefashoni. Inika ingqwalaselo ephambili yokwamkelwa ngokubanzi kwephakeji enokuphinda isebenze kwaye iphakamise iimpembelelo zayo ezilungileyo.
Iziphumo ezipapashiweyo kwiphepha elinesihloko esithi 'Ukunyuka kokuPakishwa okunokuphinda kusetyenzwe: Ukuqonda ifuthe kunye neMephu yeNdlela yokuKhangela' bonisa imeko ecacileyo yokuphinda isebenze kwakhona, ebonisa kwezinye iimeko, ukuncitshiswa okungaphezulu kweepesenti ezingama-80 kwimveliso ye-CO2, kunye neepesenti ezingama-87 ngaphantsi kwenkunkuma yeplastiki, ngokobunzima, xa kuthelekiswa nenye indlela yokusebenzisa enye. Eli phepha likwabonisa ukukhanya kwinani lezinto ezinokuthi zibe nefuthe elibi nefuthe kubandakanya umgama wokuhamba, amaxabiso okubuyisa kunye neendidi zokupakisha ezisetyenzisiweyo.
Ukukhula kwe-e-commerce kumzi-mveliso wefashoni, esele lelona candelo likhulu lentengiso ye-e, kuyakhawulezisa, kukhuthazwe ukuvalwa kwevenkile ezitena nezodaka ngenxa yobhubhane. Kananjalo, ibango lokusetyenziselwa into enye, kunye nokuveliswa kwenkunkuma, liyanda. Nangona kunjalo, ukhetho olunokuphinda lusebenze, olujolise ekuguqulweni kwempahla ukusuka kusetyenziso olunye ukuya kwizinto ezininzi ezisetyenziswayo, ziyaphunyezwa njengenye indlela ezinzileyo, utshilo uFashoni wokuLungileyo kupapasho lweendaba.
“Ukupakisha okunokusetyenziswa kwakhona sisitshixo esiphambili ekuvaleni iluphu kwiiplastikhi kwishishini lefashoni. Siyathemba ukuba iziphumo ezikweli phepha zizo ezokuqinisekisa ishishini ukuba isetyhula iyenzeka namhlanje kwaye siyisebenzise njengesixhobo sezixhobo ukwenza imephu yendlela yabo yokufumana izisombululo ezizinzileyo, utshilo u-Katrin Ley, u-Fashion for Good.
Ukusetyenziswa okukodwa kusetyenziselwa ukukhutshwa kwezinto ezingafunekiyo zokwenza indalo kwaye kuvelise inkunkuma eninzi; eqikelelwa kwizigidi ezili-15 zeetoni eYurophu ngo-2018. Endaweni yokuba ilahlwe emva kokufikelela kumthengi, iipakethe ezinokuphinda zisebenze ziyabuyiselwa kwaye ziphinde ziphinde zijikeleziswe kuhambo oluninzi. Ngokwenza njalo, bayoyisa eminye imiba yokupakisha kusetyenziso olunye kwaye banokubanakho ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo yokupakisha kwi-e-commerce.
Ngegalelo elivela kwiFashoni yaBalingani beBrand elungileyo u-Otto kunye noZalando, kunye nabasunguli abanokuphinda baphinde basebenzise iLimeloop, i-RePack kunye ne-Returnity, eli phepha likwaqaqambisa izifundo kunye nokuqwalaselwa okuphambili kokuphinda kupakishwe okusetyenziswayo, kukhululwe.
Eli phepha laqalwa yiFashoni yokuLunga njengenxalenye yenyathelo elibanzi lokujongana nemiceli mngeni yokupakishwa kweplastiki kwishishini lefashoni.